डिभोर्सपछि पश्चाताप गर्दै सामन्था, श्रीमानको नाममा यस्तो ट्याटु ! – Sandesh Press
May 26, 2022 229
तेलुगु फिल्म इन्डस्ट्रीकी चर्चित अभिनेत्री सामन्था रुथ प्रभु आजकल आफ्नो आगामी प्रोजेक्टमा निकै व्यस्त छिन् ।
उनी सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै सक्रिय छिन् । सामाजिक सञ्जालमा उनलाई ठूलो संख्यामा फ्यानले फलो गर्ने गरेका छन् । आफ्ना फ्यानहरूसँग आफ्ना प्रोजेक्टहरू बारे जानकारी बाँड्नुका साथै आफ्ना सुन्दर फोटो-भिडियोहरू सेयर गरिरहेकी छिन् ।
Prevनेपालमा सक्रिय पुरुष ‘वेश्यालय’: बिदेशमा भएकाका श्रीमती र धनाढ्य महिला मुख्य ग्राहक
Nextके तपाईँलाई थाहा छ, पसलमा बिक्री गर्न राखिएको घडीमा सधैँ किन १०ः१० बजेको हुन्छ ?
राजेश हमालजी मेयर ताक्नु अघि राजनीति सिक्न माओवादीमा आउनुसः पञ्चा सिंह
मिरुनाले आरोप लागाएका लामाको बयान, यस्तो रहेछ बास्तविकता(भिडियोमा)